​मिस ईकलेज २०१८ का प्रतियोगीले देखाए प्रतिभा
Sunday, 11 Feb, 2018 1:17 PM
काठमाडौं, २८ माघ । मिस ईकलेज सिजन ८ मा सहभागी २९ जना प्रतियोगीहरुले कमलादीस्थित सिडब्लु पार्टी प्यालेसमा हिजो भएको एक कार्यक्रमबीच आफ्नो आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा सृजना लामाको पहिलो जुनी बोलको गीत गाएर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी थिइन भने रोजीना केसीले गैरी खेतको शिरै हान्यो भन्ने गीतको बोलमा नृत्य प्रस्तुत गरेको थिइन् । सोफिया श्रेष्ठले नेवारी गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन भने मनिषा वराइली र रोजनी मर्हजनले पनि कतिमाया लाग्छ भन्ने गीतमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । फुरु लामा सेर्पाले विश्व वातावरणको असरको वारेमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् ।
सृजना लामाले पहिलो जुनीको बोलको गित गाएर आफ्नो प्रस्तुती दिएकी थिइन् भने अपेक्षा ढुङानाले राज्यको समावेसी विषयमा आफनो भनाइ प्रस्तुत गरिन् । करुना गुरुङले मेरो दुलुङ गाउँको गीतमा राम्रो नृत्य प्रस्तुती दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा आङ डामु सेर्पाले पनि धरानको बजार बोलको गीतमा नृत्य गरेर उपस्थित दर्शकहरुलाई मनोरन्जन प्रदान गरेकी थिइन् । त्यस्तै चोली अलि छोटो छ भन्ने बोलको गीतमा आसा लिम्वुले नृत्य गरेकी थिइन्, पासाङ लामु सेर्पाले आफ्नो भाषाको गीतमा नृत्य गरेकी थिइन, काजोल तामाङले डाफेझै नाचने हिमालझै हाँस्ने बोलको गीतमा नृत्य गरेकी थिइन् । त्यस्तै सविता लामाले पनि गैरीखेतको शिरै हान्यो वोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सुनकोसी सुसेली गीतमा उर्मिला गोलेले आफ्नो नृत्य मार्फत प्रतिभा प्रस्तुत गरेका थिए । पेमा लामा, प्रविना कपाली, रविना तामाङले पनि विभिन्न नेपाली गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा देखाएका थिए । अलिसा श्रेष्ठले राधा बोलको गीतमा नृन्य देखाएर सवैलाई रोमान्चित बनाएकी थिइन भने सन्ध्या थापाले हिजोराती सपनीमा बोलको गीतमा आफ्नो प्रस्तुती दिइकी थिइन । अन्जना हमालले तनाव विषयमा आफ्नो विचार राखेकी थिइन् ।
उक्त कार्यक्रमा निर्णायक मण्डलमा कल्व उड्ल्याण्डमा म्यानेजीङ डाइरेक्टर श्रवणकुमार कुँवर, सिम्रिक एयरलाइन्सकी चिफ क्याविन क्रयू अस्मिता खनाल, जुम्वा प्रशिक्षक सोनाम केसी, मिस इकलेज २०१५ की विजेता नितिका कर्मचार्य, मिस इकलेज २०१७ की सेकेन्ड रनरअप युनीता खत्री रहेका थिए ।
कलेजमा अध्ययनरत टिनएज युवतीहरुको व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास अभिवृद्धि, क्षमता उजागर लगायत नेतृत्वदायी क्षमताको विकास साथै उच्च शिक्षाको अध्ययनको लागि सहयोग पु¥याउने र समाज उपायोगी जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा अगाडि आउन सहयोग गर्ने हेतुले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
स्टेज पर्फमेन्स क्याटवाक आदि लगायतका विभिन्न विद्यामा भने कोरियोग्राफर रोजीन शाक्यले गु्रमिङ गरिरहेकी छिन् । फागुन ५ गते शनिवारको दिन उक्त प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतिस्पर्धा काडाघारीस्थित अक्षरा स्कुलको सभाहलमा सम्पर्न हुनेछ । प्रतियोगिताका विजेताले ‘मिस ईकलेज २०१८’ को ताज उपाधिसहित रु. एक लाख ८० हजार पर्ने यामाहा रेजी स्कुटर र उच्च शिक्षामा १ लाख वरावरको छात्रावृत्ति, नेपाल एयर होस्टेज एकाडमीको तर्फवाट रु. २५ हजार वरावरको एयर होस्टेज तालिम दिइने छ । साथै अन्य गिफ्टहयाम्पर पाउने छन् । फस्ट रनर अपले मोवाइल ट्याव र सेकेण्ड रनर मोवाइल फोन साथै १ वर्षको छात्रावृत्ति र अन्य गिफ्टहयाम्पर प्राप्त गर्ने छन् । साथै विजेता ३ जनाले ५ दिनको बैंकक पटाय भ्रमणको अवसर पनि प्रदान गरिने छ । यस बाहेक अन्य विभिन्न १८ विधामा पनि सवटाइटल प्रदान गरिने छ ।